Ntuziaka ferlọ Ọrụ: Mwepụta ma Gbaa Mmemme Mgbasa Ozi nke Gị | Martech Zone
Azụmaahịa ọ bụla nwere oke mgbasa ozi na usoro mmefu ego ga-agwa gị na ndị na-ezo aka bụ ụzọ kacha enye ego maka inweta ndị ahịa ọhụụ. M hụrụ n'anya referrals n'ihi na ulo oru m na-arụ ọrụ na-aghọta m na-eme na ike na-aghọta na ndị ọrụ ibe ha mkpa enyemaka na m nwere ike inye. Ghara ikwu na onye na-ezo aka na m enweworị ntụkwasị obi na nkwenye ha na-ebu ọtụtụ ibu. Ọ bụghị ihe ijuanya na ndị ahịa akpọtụrụ zụtara n'oge na-adịghị anya, tinyekwuo ego, ma zoo ndị enyi ndị ọzọ:
92% nke ndi ahia ntụkwasị obi n'aka ndị ha maara.
Ndị mmadụ bụ 4x yikarịrị ka ị zụọ mgbe enyi gi kwuru ya.
Ntuziaka loops nwere ike belata ego gị maka ihe ọ bụla site na ihe ruru 34%
Ihe isi ike, n'ezie, bụ otu esi soro ndị na-ede aha ndị ahụ gaa na ntụgharị. N'ime ụwa anyị n'ịntanetị, enwere ike soro ndị na-ezo aka na iji njikọ pụrụ iche. Inwe usoro nke na-ekesa njikọ ndị ahụ ma soro onye ọ bụla na-ekwu okwu.
Ntuziaka Factory is a referral marketing platform that provides your company with a self-service, mfe, na zuru ezu Ntuziaka ahá »‹ a azá »::
Echegbula onwe gị banyere ịbanye na inwe ịmepụta na ịmepụta ihe ọzọ. Ntuziaka Factory -abịa na ọtụtụ narị-tupu-ewu, mobile-njikere ọdịda peeji nke ndị pụrụ iche ma ọ bụ mimic Ntuziaka peeji nke pụtara ụdị. Nwere ike hazie onyonyo niile, akara, kopi, na ụgwọ ọrụ na nke ọ bụla n'ime ndebiri ndị ahụ.
Ozugbo gị Ozi Ntuziaka E wuru ya, ịnwere ike iji aka gị tinye ndị ọrụ site na dashboard, ma ọ bụ mee ka ndị ọrụ nweta ọrụ iji nweta njikọ njikọta ha n'ọtụtụ ụzọ:
Via njikọ kesara pụrụ iche maka onye na-ezo aka ọ bụla
Via koodu QR maka onye obula
Via ihe agbakwunyere usoro mmemme na weebụsaịtị gị
Gị akuko na Ntuziaka Factory na-enyere gị aka ilegide anya na uto nke usoro ntinye akwụkwọ gị ka ị wee mara onye ndị na-ekwu okwu gị dị elu. You nwere ike ịnweta data gị site na dashboard ma ọ bụ zipụ ya site na webhook - ị nwekwara ike ibupụ data gị n'oge ọ bụla dị ka faịlụ CSV.
Ntuziaka Factory ugbu a integrates na Hubspot ma na-agbakwunye Salesforce, Intercom, Shopify, na WooCommerce yana API na-abịa n'oge adịghị anya.
Ngosipụta: Ana m eji njikọ ntinye aka nke wuru Ntuziaka Factory N’isiokwu a dum.
Tags: Ntuziaka ụlọ ọrụNtuziaka ọdịda peejiNtuziaka njikọahịa ahịaNtuziaka n'elu ikpo okwuNtuziaka software